मरेपछि सामाजिक सञ्जालको अकाउन्ट के हुन्छ ? - Khabar Break | Khabar Break
मरेपछि सामाजिक सञ्जालको अकाउन्ट के हुन्छ ?
तपाईंको दिमागमा एउटा विचार आउँछ कि आउँदैन ? कुनै प्रयोगकर्ताको मृत्युपछि उसको सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट के हुन्छ ? मान्छे मरेपछि उसको अकाउन्ट निष्क्रिय हुन्छ होला र युजरसँगै उसको पासवर्ड पनि हराउँछ होला भन्ने लाग्छ मानिसलाई तर कुरो त्यसो हैन ।
सामाजिक सञ्जालका साइटले आफैं कुनै युजरको मृत्युको जानकारी पाएपछि एक्सन लिन्छन् र अकाउन्टमा परिवर्तन गर्छन् ।
यसरी एक्सन् लिन्छन् साइटहरूले :
फेसबूक चलाउने कुनै युजरको मृत्यु भएपछि अकाउन्टलाई तीन तरिकाले प्रोसेस गरिन्छ । यसलाई मेमोरियलका रूपमा राख्न सकिन्छ, पूरै डिलिट गर्न सकिन्छ वा अन्य युजरको रिक्वेस्टमा अकाउन्टबाट कन्टेन्ट डाउनलोड गरेर डिलिट गर्न सकिन्छ । फेसबूक अकाउन्टलाई मेमोरियलाइज गरेपछि फ्यान पेज वा डिजिटल ग्रेभ जस्तो बनाउन सकिन्छ, जहाँ मानिसले आएर केही लेख्न त सक्छन् तर नयाँ फ्रेन्डहरू याड हुँदैनन् । डिलिट गर्ने स्थितिमा अकाउन्टको पूरा डेटा मेटिन्छ । डिलिट गर्ने रिक्वेस्ट मृत प्रयोगकर्ताको सेट गरेको ट्रस्टेड व्यक्तिले मात्र सक्छ ।
इन्स्टाग्राममा पनि फेसबूकको जस्तै अकाउन्ट मेमोरियलाइज गर्न र पूरै डिलिट गर्न मिल्ने विकल्प छन् । तर फेसबूक जस्तो यसमा युजरले पहिले नै कोही ट्रस्टेड व्यक्ति छान्न सक्दैनन् । युजरको मृत्युपछि परिवारका कुनै सदस्यले इन्स्टाग्राममा उसको डेथ सर्टिफिकेट सहित रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अकाउन्टका बारेमा निर्णय लिने अधिकार उनीहरूले प्राप्त गर्छन् ।
जिमेल र युट्युब
गूगलको इनयाक्टिभ अकाउन्ट म्यानेजरले अप्सन दिएर डिजिटल डेटा क्लेम गर्न मिलाउँछ । तपाईंले चाहेमा ९० दिनसम्म इनयाक्टिभ रहेको स्थितिमा आफ्नो अकाउन्ट टर्मिनेट गर्ने विकल्प पनि छान्न सक्नुहुन्छ । यसबाहेक परिवारको सदस्यले मृत युजरको अकाउन्टका विषयमा गूगलसँग सम्पर्क राखेर कुनै जरूरी डेटा माग्न सक्छ ।
ट्विटरले फेसबूक वा गूगलको जस्तो कुनै नीति बनाएको छैन र मृत युजरको अकाउन्टको विषयमा आफैं कुनै एक्सन पनि लिने गरेको छैन । तर मृत युजरको परिवारको कुनै सदस्यले ट्विटरमा सम्पर्क गरेर डेथ सर्टिफिकेट दिन सक्छ र युजरको अकाउन्ट डिएक्टिभेट गरियोस् वा त्यसमा परिवर्तन गरियोस् भनी अनुरोध पठाउन सक्छ । एजेन्सी